Chitatu, 23 Nyamavhuvhu 2017
Kukura NeShoko RaMwari
"Savacheche vachangoberekwa, pangai mukaka womweya, usina kushatiswa, kuti mukure nawo" (1 Petro 2:2).
Kukura ndiko kurarama. Chinhu chipenyu chinofanira kukura. Chisingakuri chinenge chakafa. Zvino, iwe unogona kunge uri Mukristu. Mweya wako unofanira kukura. Asi Shoko raMwari ndiro roga rinoita kuti ukure. Shoko raMwari kudya. Ndiko kudya kwemweya wemunhu.
Shoko raMwari rinoshandura hupenyu hwako. Rinohuwedzera kubwinya. Asi iwe unofanira kugamuchira Shoko iri nerutendo. Unofanira kurigamuchira wakazvininipisa. Unofanira kurigamuchira nemufaro. Ndiko kuti rikukudze. Izvi zvakafanana nemhodzi. Dzinofanira kudzvarwa panzvimbo yakanaka. Ndiko kuti dzimere. Ndiko kuti dzikure. Iwe ungadavo kukura pamweya. Unofaniravo kuisa mweya wako panzvimbo ine Shoko raMwari. Usadarikwa nemikana yekudya Shoko raMwari. Ichi ndicho chikonzero uchifanira kuva nhengo yechechi. Muchechi umu ndimo maunodzidza Shoko raMwari. Shoko iri rinoisa rutendo mumweya wako. Rinovaka mweya wako. Rinoita kuti mweya wako usimbe.
Unofanira kuzvivona uchikura pamweya. Unozonakidzwa nazvo. Zvinoda kufanana nekuona mucheche achikura. Mwana uyu anotanga achikambaira. Anozotanga kufamba. Anozopedzisira omhanya. Kukura pamweya kunotonakidza kudarika izvi. Kunoshandura hupenyu hwako. Zvinhu zvenyika ino zvinotanga kusareva chinhu kwauri. Unogona kunge une zvinhu zvawaisifarira. Unozotanga kusafarira zvinhu izvi. Zvinenge zvisisina kukosha kwauri. Panogona kunge paiva nezvinhu zvaikutsamwisa. Zvinhu izvi zvinotanga kusakutsamwisa. Shungu dzako dzinenge dzangova pazvinhu zvaMwari. Ndizvo zvaunenge wava kufarira. Hupenyu hwakadai hunoshamisa!
Unenge wava kugona kuchengeta hutano hwako. Ungasangana hako nezvinotsvaka kukukanganisa. Asi unenge wava kuziva kuzvigadzirisa. Ndizvo zvinoitika paunokura muChikristu. Unenge wava kuziva kuti mukuru wacho ndiye anogara mukati mako. Unenge wava kuziva kuti wakakunda, ukapedza. Nokudaro, unenge usisanetseki nezvinhu zvingakurwisa.
Asi izvi hazviitiki zvoga. Zvinouya nekudya Shoko raMwari. Unofanira kuridya rakawanda.
Baba vandinoda. Ndinokutendai. Makaisa mandiri shungu. Idzi ishungu dzekudyidzana neShoko renyu. Ndinobvuma kukurudzirwa. Ndinobvuma kudzidziswa. Ndinobvuma kurovedzerwa muzvinhu zvepamweya. Ndinoda kuti rutendo rwangu rusimbiswe. Izvi ndizvo zvinoita kuti ndigone kurarama hupenyu hwamakandirongera. Hupenyu uhu huri muna Kristu. Muzita raJesu. Ameni.
2 Timotio 3:15-17